बुबाबाटै आठ महिनाकी छोरी बलात्कृत
महिला खबरमा प्रकाशित,२३ चैत्र, नवलपरासी ।
सुन्दै आङ जिरिङ्ग हुने । पत्याउनै मुस्किल घटना । तर पनि पत्याउनै पर्ने । सबैभन्दा संरक्षक मानिने बुबाले आठ महिनाकी छोरी बलात्कार गरेको घटनाले फेरी एकपटक हाम्रो समाज कहाँ जादैछ ? भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ ।
यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ
महिला खबरमा प्रकाशित,२३ चैत्र, रामेछाप ।
बिरामी भएर स्वास्थ्यकर्मीकोमा उपचार गर्न गएकी एक युवतीले स्वास्थ्यकर्मीबाटै यौन दुव्र्यवहार भएको भन्दै जवर्जस्ती करणी अन्तर्गत उजुरी दर्ता गराएकी छन् । उजुरी दर्ता पछि स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन् ।
न्युज २४ मा प्रकाशित,२२ चैत्र, मोरङ ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ स्थित एसिसी इँटाभट्टामा पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर गएराति एक बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही इँटा उद्योगमा काम गर्ने भारत घर भएका फैदुल मियाँका एक वर्षीय छोरा अलमान मियाँ रहेका छन् ।
खोलामा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु
थाहा खबरमा प्रकाशित,२२ चैत्र, संखुवासभा ।
सिलिचोङ गाँउपालिका–१ मा खोलामा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु भएको छ। सोही वडाको रियाम्मा गाउँका १४ वर्षीय छोरा धर्मेन्द्र राई र १३ वर्षीय बालकुमार राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
डोल्पामा विद्यार्थीको पढाइ परीक्षण गरिने
कान्तिपुरमा प्रकाशित,२२ चैत्र, डोल्पा ।
डोल्पाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाइ सीप परीक्षण गरिने भएको छ । कक्षा २ र ३ का विद्यार्थीहरुमा प्रारम्भिक कक्षा पढाई सीप परीक्षण गर्न लागिएको हो । विकासमा मात्र नभएर शिक्षामा समेत पछाडि परेको जनाउदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पाले अबको केही महिनाभित्र विद्यालयहरुमा नेपाली भाषा पढाई सीप परीक्षण गर्न लागेको छ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,२१ चैत्र ,महोत्तरी ।
सोनमा गाउँपालिका ७ सुन्दरपुरकी १४ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । आरोपी सोनमा २ का २० वर्षीय चाँद अहमदविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
दुई बालिका बलात्कृत, पैसा दिने प्रलोभन दिई छिमेकीबाटै बलात्कार
कान्तिपुरमा प्रकाशित,२१ चैत्र, कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १० जिमुवामा एक व्यक्तिले दुई बालिका बलात्कार गरेका छन् । स्थानीय २१ वर्षिय किसन नाथले पैसा दिने प्रलोभन देखाई ७/८ वर्षकी दुई बालिकालाई सोमबार सॉझ बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई विद्यार्थीको डुबेर मृत्यु
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,२१ चैत्र, धादिङ ।
बुढीगण्डकी नदीमा नुहाउन गएका दुई जना विद्यार्थीको मंगलबार साँझ नदीमा डुबेर ज्यान गएको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर – २ सल्यानटार निवासी १५ वर्षीय कुशल हमाल र १३ वर्षीय कस्मिक हमाललाई बुढीगण्डकीमा डुबेपछि उद्धार गरिएको थियो ।
नातिनीलाई करणी गरेको आरोपमा पक्राउ
थाहा खबरमा प्रकाशित,२१ चैत्र, पाँचथर ।
नातिनीलाई करणी गरेको अभियोगमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पाँचथरका ५८ वर्षीय एक व्यक्तिले आफ्नी १२ वर्षीया नातिनीलाई २०७४ पुस १ गतेदेखि करणी गर्दै आएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
परीक्षा दिएर फर्कंदा बलात्कृत
कान्तिपुरमा प्रकाशित,२१ चैत्र, हेटौंडा ।
एसईई परीक्षा दिएर घरतर्फ फर्कने क्रममा एक किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकी १८ वर्षीय सुस्तमनस्थितिकी किशोरीलाई चितवन राप्ती नगरपालिका घर भई हेटौंडा १० मा बस्ने २५ वर्षीय नवराज सुनारले बलात्कार गरेको किशोरीका आफन्तले दाबी गरेका छन् ।
पुल नहुँदा चेपाङ विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,२१ चैत्र, मलेखु ।
माथिल्लो कक्षा पढ्ने ठाउँ नै नभएपछि चेपाङ बालबालिकाले पढेनन् भनेर कसरी भन्ने ? घैराङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मानबहादुर चेपाङको यो प्रश्नले गाउँमा शिक्षाको कुरा गर्न आउने सबैलाई एक पटक झस्काउँछ।
बालिका बलात्कारको आरोपमा एक युवक पक्राउ
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,२१ चैत्र, काभ्रे ।
जबरजस्ती करणीको आरोपमा एक युवा पोखराबाट पक्राउ परेका छन् । बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर–१४, का २० वर्षीय वीरेन भन्ने सुबिन तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बञ्चरो प्रहार गरी दुई बालबालिकाको हत्या
कान्तिपुरमा प्रकाशित,२० चैत्र, रोल्पा ।
पश्चिमी रोल्पाको त्रिवेणी गाँउपालिका–२ नुवागाँउका २१ वर्षीय खर्कबहादुर विश्वकर्माले छिमेकी दाजु नाता पर्ने गणेश विकका एक छोरा र छोरीको बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरेका छन् ।
बीस वर्ष नपुगेका किशोरीको दुई घरबार, दुई श्रीमान्बाट दुई सन्तान
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१९ चैत्र, रोल्पा ।
एकातिर रोल्पा जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणाका लागि अभियान थालिएको छ भने अर्कोतिर बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकिराखेको अवस्था छैन ।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,१८ चैत्र, नवलपरासी ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-२ निवासी लक्ष्मण सुनारका छोरा ८ वर्षीय अनिल सुनारको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ ।
बलात्कारमा चिनजानकै संलग्नता
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१८ चैत्र, धनुषा ।
अधिकांश बलात्कारको घटनामा ‘चिनजान’ कै संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । धनुषामा भएको घटनामा चिनजानकै व्यक्तिले प्रलोभन र कब्जामा पारेर बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।
माटो खन्दा पुरिएर किशोरीको ज्यान गयो
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,१८ चैत्र, बैतडी ।
बैतडीमा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एक किशोरीको ज्यान गएको छ । बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका – ६, बसेडीकी लक्ष्मी सुतारको माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर ज्यान गएको हो ।
सुस्तमनस्थितिकी बालिका सामूहिक बलात्कारको शिकार, एक पक्राउ
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१६ चैत्र, सुनसरी ।
सामूहिक बलात्कार घटनामा संलग्न मध्ये एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पक्राउ परेका अविनाश सरदारसहित तीनजनाले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका– १३ खनार बस्ने सुस्तमनस्थितिकी १२ वर्षीया एक बालिकालाई गत १३ गते बेलुका गहुँ खेतमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए ।
५ सय रुपैयाँ दिएर बालिका बलात्कार गर्ने प्रहरी पक्राउ
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,१४ चैत्र, पाँचथर ।
बालिकालाई फकाएर पटक–पटक बलात्कार गरेको रहस्य सार्वजनिक भएपछि पाँचथरको नवमीडाँडा प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक बलबहादुर ठटाल पक्राउ परेका छन् । १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कर गर्ने झापा भद्रपुरका ठटाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,१४ चैत्र, ललितपुर ।
चैत ८ गते सातदोबाटो प्रहरी वृत्तनजिकै राजेश बराइलीले ५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार प्रयास गरे। घटनाको केही बेरमा प्रहरीले पीडकलाई घरैबाट समात्यो। अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा छन् ।